Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | Wararka IPhone
iPhone Waa taleefanka gacanta ama casriga ah Apple. Moodelkii ugu horreeyay ayaa la iibiyay 2007. Waa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa la socda shaashad taabasho badan iyo kii ugu horreeyay ee jiilkeeda ee ka saara batoonka. Isaga nidaamka qalliinka waa macruufka, oo la mid ah iPod Touch iyo iPad. Isaga interface kacaan waxay abuurtay dhammaan nidaamyada hawlgalka moobiilka ee hadda jira. iPhone waa taleefanka ugu iibinta badan taariikhda. Muuqaalka ka soocaya qalabkan moobilada kale waa barnaamijyada, waxaa jira barnaamij ku dhow wax walba.
by Alex vincent samee 1 saac .
Dhammaadkii usbuucii hore waxaan kuugu sheegnay qoraalkan in Bloomberg uu ku dhawaaqay inuu ku soo beegmay falanqeeyaha Ming-Chi…
by Kariim Hmeidan samee horas 7 .
Sonos waa Apple ee ku hadla, astaan ​​ku takhasusay ku hadla isku xiran oo had iyo jeer lagu sifeeyay inay yihiin…
by louis padilla samee 2 maalmood .
by Miguel Hernández samee 3 maalmood .
Bloomberg sidoo kale waxay taageertaa iPhone 15 oo leh USB-C
by Alex vincent samee 4 maalmood .
Waxaa jira warar xan ah oo aad u badan oo beryahan dambe na soo gaaraya oo ku saabsan wax ka beddelka suurtagalka ah ee lagu samaynayo dallacaadda dekedda soo socota…
Apple wuxuu ku dari karaa USB-C iPhone 15 isagoo macsalaameynaya Hillaac
by Angel Gonzalez samee 6 maalmood .
Xidhiidhiyaha Hillaaca wuxuu yimid iPhone 5 ilaa markaas wuxuu ahaa xiriiriyaha loo isticmaalo dhammaan iPhones iyo…
Sonos wuxuu soo bandhigayaa dhawaqa cusub ee "Ray" ee la awoodi karo laakiin leh tayada had iyo jeer
by louis padilla samee 6 maalmood .
Sonos wuxuu soo bandhigay waxyaalihiisa cusub wuxuuna noo keenay ku hadla cusub qolkayaga fadhiga kaas oo naga dhigi doona inaan ku raaxaysanno…
Apple waxay cusbooneysiisaa AirPods, AirPods Pro iyo AirPods Max
Apple ayaa soo saartay casriyeyn cusub oo firmware ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah ee gaaraya…
by Kariim Hmeidan samee 1 toddobaad .
Hal sano ayaa laga joogaa markii aan gacanta ku haynay AirTag. Qalab u muuqday in aanu waligii soconayn...
by Alex vincent samee 1 toddobaad .
Imaanshiyaha taleefoonnada madaxa ee ugu horreeya ee Apple, AirPods Max, ayaa la yimid sacab muggiis oo midabyo ah oo hoos yimaada…